Miangatra mamely an’i Shina ve ny media tandrefana? (Fizarana voalohany) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Septambra 2018 14:37 GMT
Diabe iray mpanohana an'i Shina ao Calgary, Canada nomanin'ny teratany shinoa monina ao Canada ho valin'ny “tsikaritra ho fitongilanan'ny media tandrefana” tamin'ny taona 2008. SARIPIKA: Robert Thivierge (CC BY-SA 2.0) via Wikimedia Commons.
Avy amin'i Pong Lai
Tsy mitsahatra ny mamerimberina i Shina fa miangatra mamely an'i Shina ny media tandrefana, indrindra fa ireo liberaly. Nitsangana ihany koa ity lohahevitra ity ao amin'ny sehatra fanontaniana sy valiny toy ny Quora. Ao ny olona miady hevitra fa misy ny fitongilanana, ary misy ireo manontany raha misy fikasana ratsy ao anatin'ny fanaovana izany.
Mba hanohannaa ny fanadihadianay amin'ireo fanontaniana ireo amin'ny data sasantsasany, nampiasa fitaovana an-tserasera miisa roa izahay, Media Cloud sy Google Trends, hanadihadiana ireo tati-baovao miresaka an'i Shina amin'ny teny anglisy.
Voalohany indrindra, namakafaka ny filazan'i Shina izahay hoe mampihena ny fijerena ny toekarenan-dry zareo ny fifantohan'ny media tandrefana amin'ny resaka zon'olombelona sy ny fandotoana. Nampiasa ny Media Cloud, sehatra open source [azon'ny rehetra hanovozan-torohay] izahay hanjohiana ireo tantara an-tapitrisany nivoaka an-tserasera, mba hamoahana zavonteny mifandraika amin'ny fangatahana “China” teo anelanelan'ny voalohany janoary 2013 sy voalohany janoary 2017 avy amin'ireo vaovao an-tserasera malaza ao Etazonia, izay mifototra amin'ny comSORE, Activate ary Alexa, sy ireo loharanom-baovao manerantany amin'ny teny anglisy, izay mifototra amin'ny dosie ABYZ amin'ny loharanom-baovao nasionaly amin'ny teny anglisy. Raha ampiarahana izy roa ireo dia ahitana seha-baovao amin'ny teny anglisy an'aliny manerana izao tontolo izao.
Endrika 1: Ireo teny malaza mifandraika amin'ny voanteny ‘shina’ hitan'ny Media Cloud.
Araka ny asehon'ny endrika 1, “econom*” (toekaren) no teny faharoa voamarika indrindra mifandraika amin'ny voanteny “Shina”. Miresaka fifandraisana iraisampirenena ireo teny hafa tampony. Hita amin'ny tantara miisa 12 ny voambolana “fandotoana” ary izy no voamarika laharana faha-48 tao ain'ny tantara miisa 1000 nohadihadiana. Tamin'ny tantara miisa fito ihany no nahitana ny voambolana “fihetsiketseham-panoherana”, ary izy no voanteny faha-118 voamarika. Ilaina ihany koa ny manamarika fa tsy hita ao amin'ny zavonteny mifandraika amin'i Shina ny voambolana “zon'olombelona” na “zo”, izay manondro fa tsy hita ao amin'ny tantara maro avy amin'ireo fampitam-baovao voalahatra ho eny an-tampon'ny vaovao an-tserasera ao Etazonia ao amin'ny dosie ABYZ.
Na dia tsy fantatra aza na milaza tsara na milaza ratsy amin'ny toekarenan'i Shina ireny tantara ireny, ny valiny dia tsy manohana ny filazan'i Shina fa tsy miraharaha ny fitomboan-karena any Shina ny fampitam-baovao tandrefana fa mifantoka amin'ny zon'olombelona sy ny fandotoan-drivotra.
Araka ny fitarainan'i Shina fa mbola manao fisainan'ny tamin'ny andro mangatsiaka i Etazonia ary ampiasainy ny media hanafihana ny fireneny, dia nampitaha valim-pitadiavana telo izahay: “china AND econom*” (Shina SY toekaren*), “china AND pollut*” (Shina SY fandoto*), ary “china AND “human right”(Shina sy zo), avy amin'ny vaovao an-tserasera malaza ao Etazonia sy ny loharanom-baovao amin'ny teny anglisy manerantany. Toy izao ny isan'ny lahatsoratra tafiditra avy amin'ireo fangataham-pitadiavana tamin'ny karazam-doharanom-baovao roa ireo, 98 063 sy 344 579 tamin'i “shina SY toekaren”; 10 286 sy 28 238 tamin'ny “shina SY fandot*”, ary 29 680 sy 93 457 tamin'ny “shina SY zon'olombelona”. Ny ampahan'ny (ratio) vaovaon'ny fandotoana mitaha amin'ny vaovao toekarena dia 10% sy 8%, ary ny ampahan'ny (ratio) vaovaon'ny zon'olombelona amin'ny vaovaon'ny toekarena dia 30% sy 27%, ho an'ny vaovao an-tserasera tampony ao Etazonia sy ny loharanom-baovao manerantany amin'ny teny anglisy araka izay filaharany izay.
Asehon'ny vokatra fa tsy dia misy loatra ny fahasamihafana eo amin'ny famoaham-baovao an-tserasera tampony ao Etazonia sy ny loharanom-baovao amin'ny teny anglisy manerantany, ary kely ny porofo fa mitodika amin'ny endrika ratsy amin'i Shina sy mampîasa ny media ho fitaovam-piadiana enti-mamely ny firenena ny fampitam-baovao ao Etazonia, raha oharina amin'ny fampitam-baovao teny anglisy manerantany.
Endrika 2: ny isan'ny tantara ahitana ny voanteny ‘shina’ avy amin'ny loharanom-baovao ankavia sy ankavanana mifototra amin'ny Media Cloud.
Ho fanadihadiana ny “fiangaran'ny media liberaly mamely an'i Shina”, nampitahainay ny vokatra tao amin'ny Media Cloud avy amin'ny loharanom-baovao mirona miankavia sy ny loharanom-baovao mirona miankavanana, voafaritry ny isan'ny rohy anaty sioka tamin'ny fifidianana tao Etazonia miresaka an'i Clinton (ankavia mankany amin'ny liberaly) sy Trump (ankavanana) tamin'ny taona 2016.
Araka ny hita eo amin'ny Endrika 2, Mitovitovy ihany ny tantara miresaka an'i Shina ho an'ny loharanom-baovao mirona miankavia sy miankavanana talohan'ny taona 2014, saingy nihabetsaka kokoa amin'izay rehefa avy eo ny an'ny loharanom-baovao mirona miankavanana rehefa avy eo. 104 936 ny isan'ny tantara rehetra tanelanelan'ny voalohany janoary 2013 sy voalohany janoary 2017 avy amin'ny loharanom-baovao miankavia raha 188 843 kosa izany avy amin'ny loharanom-baovao mirona miankavanana.
Endrika 3: Ireo teny malaza mifandraika amin'ny voanteny ‘shina’ avy amin'ny loharanom-baovao mirona ankavia sy ankavanana, mifototra amin'ny Media Cloud.
Amin'ireo teny folo ampiasaina betsaka indrindra mifandrohy amin'i Shina (jereo ny endrika 3), ny loharanom-baovao mirona ankavanana no manana tantara betsaka kokoa momba an'i Rosia, Japan ary Korea, ary ny loharanom-baovao mirona miankavia no manana tantara betsaka kokoa momba an'i India, ny toekarena ary i Hong Kong. Voalahatra any amin'ny laharana faha-29 ny “Fandotoana” any amin'ny loharanom-baovao mirona miankavia ary any amin'ny laharana faha-46 any amin'ny loharanom-baovao mirona miankavanana. Voalahatra any amin'ny laharana faha-203 ny “Fihetsiketseham-panoherana” any amin'ny loharanom-baovao mirona miankavia raha laharana faha-51 kosa any amin'ny loharanom-baovao mirona miankavanana.
Raha fehezina, dia ireo fampitam-baovao mirona miankavanana no mamoaka tatitra betsaka kokoa sady lavitra dia lavitra noho ireo fampitam-baovao mirona miankavia, indrindra taorian'ny taona 2014. Mifanohitra amin'izay notoroan'i Shina, ny loharanom-baovao mirona miankavia no mitatitra betsaka kokoa momba ny toekarenan'i Shina, raha miresaka betsaka kokoa momba ny hetsi-panoherana ny loharanom-baovao manana fironana ankavanana. Raha ampitahaina dia samy tsy mitodika any amin'ny fandotoana no tsy miresaka fihetsiketseham-panoherana any Shina na ny fampitam-baovao mirona miankavia na ny fampitam-baovao mirona miankavanana.